Vavolombelon' i Jehovah - Wikipedia
Vavolombelon' i Jehovah
(tonga teto avy amin'ny Vavolombelon'i Jehovah)
Ny Vavolombelon' i Jehovah dia fikambanana kristiana mino ny fitondran' ny Mesia mandritra ny arivo taona (milenarisma) sy mihevi-tena ho mamerina amin’ ny endriny tany amboalohany ny fivavahana kristiana (restaorasiônisma). Io fikambanana io dia nipoitra avy amin' ny fikambanana atao hoe "Bible Students" (azo adika hoe "Mpianatra Baiboly" notarihin' i Charles Taze Russell izay nandray ampahany betsaka tamin' ny fampianaran' i William Miller, indrindra tamin' ny adventisma, tamin' ny alalan' ireo mpitoriteny adventista toa an' i Jonas Wendell. Mampiavaka azy ireo ny mitory teny sy mampianatra ny Baiboly isam-baravarana.
2 Ny tantaran'ny Vavolombelon'i Jehovah
2.1 Tamin'ny fitantanan' i Charles Taze Russell
2.2 Tamin' ny fitantanan' i Joseph Franklin Rutherford
2.3 Tamin'ny fitantanan' i Nathan Knorr
2.4 Fitantanana taorian' i Nathan Knorr
3 Ny finoan' ny Vavolombelon' i Jehovah
3.1 Manahaka ny fiangonana kristiana tany aloha
3.2 Ny asa soratry ny Vavolombelon' i Jehovah
3.3 I Jehovah sy i Jesosy
3.4 I Satana
3.5 Ny fiainana aorian' ny fahafatesana
3.6 Ny Fanjakan' Andriamanitra
3.7 Ny Andro farany
4 Ny Baiboly sy ny fampianarany azy
4.1 Ny fianarana ny Baiboly
4.2 Ireo Baiboly nampiasaina sy ampiasain’ny Vavolombelon’i Jehovah
4.2.1 Baiboly amin’ny fiteny anglisy
4.2.2 Baiboly amin’ny fiteny malagasy
5 Ny fifandraisany amin’ny tsy mitovy finoana aminy
5.1 Ny Vavolombelona sy ny fiangonana kristiana hafa
5.2 Ny Vavolombelon’i Jehovah sy ny fiarahamonina
6 Ireo faminaniana tsy tanteraka
6.1 Fiafaran’ny fijinjana (1874)
6.2 Fanovàna ny taona hiafaran’ny fijinjana (1881)
6.3 Fifaranan’ny fanjakazakan’olombelona (1914)
6.4 Daty hafa heverina ho fanombohan’ny Andro farany (1918)
6.5 Fitsanganan’ireo patriarka amin’ny maty (1925)
6.6 Ny fotoana hitrangan’ny Haramagedona (1975)
9 Rohy ivelany:
9.1 Tranon-kalan'ny Vavolombelon'i Jehovah:
9.2 Tranonkala mampahatsiahy ireo fampianarana taloha sy vaovao:
Ny andian-teny hoe Vavolombelon’ i Jehovah dia fandikana amin' ny teny malagasy ny hoe Jehovah’s Witnesses ka manondro ny fikambanana na ny mpikambana tsirairay (azo hafohezina fotsiny amin’ ny hoe Vavolombelona). Hita ao amin’ ny Baiboly mbola mampiasa ny teny hoe Jehovah io andian-teny io (Isaia 43.10) ary nampiasaina ho solon’ ny hoe Bible Students (“Mpianatra Baiboly”) nanomboka tamin’ ny taona 1931 tamin' ny andron' i Rutherford.
Ny tantaran'ny Vavolombelon'i Jehovah
I Charles Taze Russell
Tamin'ny fitantanan' i Charles Taze Russell
Nanangana ny fikambanana atao hoe Bible Student Mouvement ("Fikambanan' ny Mpianatra Baiboly") i Charles Taze Russell tamin' ny taona 1870 tao Pittsburgh any Pensylvania any Etazonia. Notoheriny ny finoan' ny ankamaroan' ny Kristiana toy ny amin' ny tsy fahafatesan' ny fanahin'olombelona, ny afobe, ny fiverenan' i Jesoa Kristy indray ho nofo, ny fanendren' Andriamanitra mialoha ny hoavin' ny olombelona tsirairay ary ny Trinite. Aminy dia tsy misy ny afobe, mety maty ny fanahin' olombelona ary hiverina ety an-tany i Jesoa Kristy nefa tsy ho hita maso.
Namoaka ny boky atao hoe Three Worlds (azo adika hoe Tontolo telo) izy sy i Nelson H. Barbour (mpitoriteny nanaraka ny fampianaran' i William Miller). Io boky io dia niresaka ny amin' ny andro farany, ny amin'ny fahatongavan' i Kristy fanahy tamin' ny taona 1874 mba hisantatra ny fijinjana ny vokatry ny Filazantsara ("hanavaka ny vary sy ny tsimparimpary"). Nanambara koa izany boky izany fa ny taona 1914 no namarana ny 2520 taona atao hoe "Andron' ny Jentilisa" sady hahafoana ny fitondran' olombelona eto amin' izao tontolo izao izay hosoloana tanteraka ny Fitondran' Andriamanitra. Nambaran' i Russell fa amin’ ny taona 1818 no hahatongavan’ ny ady ao Hara-magedona hifanaovan'ireo mpanjakan'izao tontolo izao amin' Andriamanitra. Nolazainy fa maro amin’ ireo teraka talohan’ ny taona 1914 no hiatrika ny fahatongavan’ izany ady izany. Nisaraka noho ny tsy fitovian-kevitra i Charles Taze Russell sy i Nelson H. Barbour tamin' ny taona 1879.
Nanomboka ny taona 1879 dia nivory ireo mpanaraka an' i Russell mba hianatra ny Baiboly ao anatina fikambanana. Fikambanana 30 no voatsangana tamin’ izany izay samy nizaka tena. Nanangana ny Watch Tower Society amin' izay i Russell tamin’ ny taona 1881, izay namoaka ny boky atao hoe Watchtower (Ny Tilikambo Fiambenana amin' ny teny malagasy, La Tour de Garde amin' ny teny frantsay). Ny tanjony amin’ izany dia ny hanaporofo fa efa ao amin' ny andro farany isika izao sady ny andro vaovao hanavaozana ny tany sy ny olona dia efa antomotra. Tamin’ ny 1881 dia i William Henry Conley no nitantana ny fikambanana Watch Tower Society. Fizaràna trakta sy Baiboly no asa nataon’ io fikambanana io. Araka ny La Tour de Garde tamin' ny 1881 dia hiaka-belona i Russell sy ny mpianany.
Tamin’ ny taona 1910 dia nahatratra tany amin’ ny zato any ho any ny mpitoriteny mandehandeha. Natao hoe “International Bible Students Association” (azo adika hoe "Fikambanana Iraisam-pirenen’ ny Mpianatra Baiboly") ny fikambanana tamin’ izay. Nafindra tany Brooklyn ao New York ny foiben’ ny Watch Tower Society. Tamin’ izany dia efa nahatratra 50 000 ny isan’ ny mpikambana. Tamin’ ny taona 1912 dia i Russell no mpanoratra namoaka gazety maro indrindra tao Etazonia. Maty tamin’ ny 31 oktobra 1916 izy tamin’ ny faha 64 taonany.
Tamin' ny fitantanan' i Joseph Franklin Rutherford
I Joseph Franklin Rutherford tamin'ny taona 1919
Tamin’ ny Janoary 1917, i Joseph Franklin Rutherford, mpisolo tena ny fikambanana eo anatrehan’ ny Fanjakana, dia lany ho filoha hitondra ny fikambanana izay nantsoina hoe “Watch Tower Bible and Tract Society”. Nisy tamin’ ireo mpikambana ao amin’ ny Filankevi-pitantanana ny nitsipaka izany fahalaniany izany. Tamin’ ny volana Jona 1917 dia nivoaka ny boky iray, izay atao hoe The Finished Mystery (azo adika hoe "Ilay Zava-miafina Tanteraka", Le Mystère Accompli amin' ny teny frantsay), izay nanangonana ny fanaovan’ i Russell heviteny momba ny Bokin’ i Ezekiela sy ny bokin’ ny Apokalypsy, izay nisy fanovonana nataon’ i Clayton Woodworth sy i George Fisher, samy mpianatra Baiboly. Araka ny voalaza ao amin' io boky io dia hisy fikorontanam-be ny eo amin' ny fanjakan' olombelona sy eo amin' ireo fiangonana kristiana anarany izay ho rava tanteraka.
Nisy fitsikerana ny fandraisan’ anjaran’ ny Kristiana tamin’ ny Ady Lehibe sy ny mpitondra fivavahana katôlika sy prôtestanta izany boky izany. Notsikerainy koa ny fampiasana miaramila sy ny fanindrahindran-tanindrazana. Nogadraina tamin' izany ny mpitantana ny Watch Tower Bible and Tract Society tamin’ ny taona 1918 fa natao hoe manohitra ny lalàna momba ny asam-pitsikilovana. Ny mpikambana hafa koa dia niharan’ ny herisetram-bahoaka. Tamin’ ny taona 1919 dia novotsorana ireo mpitarika.
Nandritra ny 25 taona nitondran’ i Rutherford dia maro ny fampianarana sy ny faminaniana nipoitra. Isan’ izany ny fanambaràna tamin’ ny 1920 ny amin’ ny hitsanganan’ ireo Patriarkan’ ny Zanak’ i Israely ho velona amin’ ny taona 1925, dia i Abrahama sy i Isaka sy i Jakoba ary i Davida. Izany no hiantombohan’ ny Fanjakana arivo taonan’i Kristy. Noho ny tsy fahatanterahan’ ny zavatra voalaza amin’ ireo fanambaràna ireo dia maro ny mpikambana niala tamin’ ny Watch Tower Bible and Tract Society ka nanangana fikambanana mpianatra Baiboly hafa. Tamin’ny taona 1930 dia nambaran' i Rutherford fa tamin’ ny taona 1914 no nanomboka ny fanatrehan' i Kristy (atao hoe “parosia”) sy ny fametrahana azy ho mpanjaka. Nanomboka tamin' izany taona izany ihany koa, hoy izy, ny Andro farany.
Tamin’ ny 26 jolay 1931, dia novana ho “Jehovah’s Witnesses” ("Vavolombelon' i Jehovah") ny anaran’ ny Watch Tower Bible and Tract Society. Tamin’ ny 1932 dia ny fandaminana vaovao atao hoe Teôkrasia ("fitondran’ Andriamanitra") no najoron’ i Rutherford hitantana ny fikambanana nefa, raha ny tena marina, dia ny tenany no lasa nitondra tokana. Nanomboka tamin’ ny taona 1932 no nampielezana fa “ondry vitsy” miisa 144 000 no hiaina ao an-danitra ka ny sasany amin’ireo dia olona nitsangana ho velona na olona hiakatra velona avy hatrany any an-danitra. Hiaraka amin’ i Kristy izy ireo hanjaka amin' ny olona rehetra eto an-tany. Ny mpino hafa rehetra ao amin’ ny fikambanana dia hiaina mandrakizay ao amin’ ny paradisa izay hataon’ Andriamanitra eto an-tany. Nihanatanjaka ny fiheveran’ ireo Vavolombelon’ i Jehovah fa fanompoan-tsampy ny fanajana ny sainam-pirenena. Niharan’ ny herisetra noho izany ny Vavolombelona sady tsy faly koa ireo governemanta tamin’ ny firenena maro toa an’ i Etazonia sy i Kanada ary i Alemaina.
Nanomboka tamin’ ny taona 1938 dia nofoanana ny fifidianana ireo mpitantana ny fikambanana fa fanendrena teokratika no natao. Nandritra ny fitondran' i Rutherford dia tsy azo atao ny mankalaza ny noely (izay heveriny fa avy amin' ny fivavahan' ny mpanompo sampy), ny mankalaza ny fetin’ ny reny (izay ataony ho isan' ny paika enti-mitaona ny olona hanohitra ny fanajana an' Andriamanitra), ny manao vaksiny (nofoanan’ ny mpandimby azy ity fampianarana ity), ny mandray anjara amin’ny zavatra mahakasika pôlitika. Zava-dehibe tamin' i Rutherford ny endriky ny hazo fijalian' i Jesoa ka ny hazo fijaliana mitanambokovoko (lakroa) dia nataony hoe famantarana avy amin’ ny mpanompo sampy satria maty tamin’ ny tsatokazo tokana, hoy izy, i Jeso Kristy.
Maty tamin’ ny 1942 i Rutherford.
Tamin'ny fitantanan' i Nathan Knorr
I Nathan Knorr
Voatendry hitondra ny Watch Tower Bible and Tract Society i Nathan Knorr tamin’ ny taona 1942. Nanomboka tamin’ ny taona 1945 dia tsy azon' ireo Vavolombelon' i Jehovah atao ny mamindra ra na ny amindrana ra nefa azo atao vaksiny indray izy ireo. Nampanao fandikan-teny vaovao ny Baiboly amin’ ny teny anglisy (New World Translation of the Holy Scriptures) i Nathan Knorr ka vita tamin’ ny taona 1961 izany. Avy amin’ izany no nandikana ny Baiboly amin’ ny tenim-pirenena hafa rehetra izay ampiasain' ny Vavolombelon' i Jehovah amin' izao fotoana izao. Namoaka fitsipi-pitondran-tena ny fikambanana. Tamin’ ny 1966 no nilazan' i Nathan Knorr fa amin’ ny taona 1975 no hanomboka ny fanjakan’ i Kristy. Nihena ny isan’ ny mpikambana taorian’ ny taona 1975 rehefa tsy tanteraka ny faminaniany. Nanomboka tamin’ ny taona 1976 dia nahena ny fahefan’ ny filohan’ ny fikambanana ka nafindra tamin’ ny Filankevi-pitantanana ny fahefana amin'ny fanapahan-kevitra momba ny zavatra ampianarina sy ny fandaminana ny fikambanana. Maty tamin’ny taona 1977 i Nathan Knorr.
Fitantanana taorian' i Nathan Knorr
I Don Alden Adams
Hatramin’ ny 2017 dia miisa telo ireo filoha nifandimby taorian’ i Nathan Knorr. I Frederick William Franz dia nitondra hatramin’ ny taona 1977 ka hatramin’ ny taona 1992 izay nahafatesany tamin’ ny faha 99 taonany. I Milton Henschel dia nitondra teo anelanelan’ ny taona 1992 sy 2000. Ny Vavolombelon' i Jehovah nanomboka tamin' ny taona 1995 dia tsy niresaka intsony ny hoe "maro amin' ireo teraka talohan' ny taona 1914 no tsy maintsy hahita ny adin' i Hara-magedona fahavelony".
I Don Alden Adams no nandimby an' i Milton Henschel nanomboka tamin’ ny taona 2000. Nafindra any Warwick ny foiben’ ny Watch Tower Bible and Tract Society tamin’ ny taona 2009.
Tamin’ ny Avrily 2017, ny Fitsarana Avo any Rosia dia nandrara ny Vavolombelon’ i Jehovah, izay heveriny ho manatratra ny tanjony na amin' ny fomba inona na amin' ny fomba inona, ka nanome baiko fanakatonana ireo sampany ao amin’ io firenena io sy fandravana ny fikambanana rehetra isan-tanàna. Ny fikambanana izay misy mpikambana miisa 175 000 ao Rosia dia nampangaina ho manimba ny fianakaviana, ho mamporisika ny olona amin’ ny fankahalana, ary mihevitra ny mpitondra ao Rosia fa loza ho an’ ny fiainan’ ny olombelona ny Vavolombelon' i Jehovah. Izany fandrarana izany dia nomelohin’ ny Vondrona Eoropeana sy i Etazonia.
Ny finoan' ny Vavolombelon' i Jehovah
Manahaka ny fiangonana kristiana tany aloha
Ny Vavolombelon’ i Jehovah dia mihevitra fa ny fikambanany no mamerina ny tena fivavahana kristiana nisy tany amin’ny taonjato voalohany (restaorasionisma) izay heveriny fa nisy fomba fitondrana tonga lafatra. Toy izao ny endrik’ izany fiangonana kristina tany amboalohany izany, araka ny fahazoany ny voalaza ao amin' ny Baiboly:
Tsy samy manana ny fivavahany ny tsirairay tamin’ izay, fa nivondrona ho fiangonana tokana. Miorina eo amin’ i Kristy ny fiangonana. Tsy nampiasa sary ny Kristiana tamin’ izay rehefa nivavaka. Tsy nasaina nitandrina ny andro Sabata izy ireo, tsy tahaka ny Zanak' i Israely tamin’ ny fotoan’ androny izay nasain’ Andriamanitra nitandrina izany, satria nifarana niaraka tamin’ ny Lalàn’ i Mosesy izany fanao izany rehefa nanao sorona ny tenany i Jesoa. Anti-panahy (na loholona) no niandraikitra azy ireo, teo ambany fanaraha-mason’ ny filankevi-pitantanana (frantsay: conseil d’administration) tany Jerosalema, ary i Jesoa no lohany. Nefa tsy nisy olona kilasina ho mpitondra fivavahana tamin’izany, tsy tahaka ny ao amin’ny fiangonana hafa. Milaza noho izany ny Vavolombelon' i Jehovah fa tsy misy famonjena azo tsy amin' ny alalan' ny fikambanany izay sady mpaminany no mahalala ny hevitr' Andriamanitra.
Ny asa soratry ny Vavolombelon' i Jehovah
Maro ny fampianarana aparitaky ny Vavolombelon' i Jehovah. Avoaka ho boky na trakta sy ampidirina anaty tranon-kala ireny fampianarana ireny ary atao amin’ ny fiteny maro dia maro nefa ny ankamaroan’ireo boky sy gazetiboky tany aloha dia tsy hita raha tsy any amin’ ny tranon-kala na tranom-boky hafa na ampahatsiahivin’ ny boky hafa tsy an’ ny fikambanana. Ny fiovaovan’ ny fampianarany dia adikany ho vokatry ny fivoaran’ ny fanambaràn’ Andriamanitra ny sitrapony izay miseho miandalana (jereo: fanambarana mitohy). Izany, hoy izy ireo, dia fahazavàna vaovao vokatry ny asan’ ny saina, ny fandalinana, ny fitarihan’ ny fanahy masina (izay herin' Andriamanitra) sy i Jesoa Kristy ary ny anjely. Miorina amin’ ny Tenin’ i Jehovah, hoy izy ireo, ny fampianarany fa tsy amin’ ny tenin’ olombelona. Noho izany dia tokony hatoky tsy amim-pisalasalana ny fampianaran’ ny Foibe ny mpikambana.
I Jehovah sy i Jesosy
I Jehovah no anaran’ Andriamanitra. Toriny sy ampahafantariny ny olona rehetra io anarana io. Amin’ireo Vavolombelon’i Jehovah, i Jesoa dia noforonin' Andriamanitra mivantana sady voalohany, zanak’ Andriamanitra izy fa tsy Andriamanitra, sady ambany noho Andriamanitra. Ny zavatra hafa rehetra dia noforonin’ i Jesoa avokoa. Ny fanahy masina kosa dia herin’ Andriamanitra. Tsy mitambatra ho Trinite ny Ray sy ny Zanaka (Jesosy) ary ny fanahy masina. Ny hazo nijalian’ i Jesosy dia tsy hazo mitanambokovoko fa tsatokazo tokana. Ho an’ ny Vavolombelon’ i Jehovah, i Jesoa dia tsy iza fa ny anjely Mikaela, na i Abadona na i Apoliona . Mpanalalana ny olombelona amin’ Andriamanitra i Jesoa. Eken’ ny Vavolombelon’ i Jehovah fa amin’ ny alalan’ i Jesoa Kristy no amonjen’ Andriamanitra ny olony. Tsy hita maso ny fiverenana na ny fanatrehan' i Jesoa Kristy.
Tany amboalohany, i Satana dia anjely noforonina tonga lafatra nefa niala an’ Andriamanitra. Izy no nanome sain-dratsy an’ i Adama sy Eva mba tsy hanaja an’ i Jehovah. Nanjary demonia ny anjely izay nanaraka an’ i Satana ka niteraka ny fahorian’ ny olombelona. Noho izany, amin' ny Vavolombelon' i Jehovah, ny fitondran’ olombelona dia eo ambany fibaikoan’ i Satana.
Ny fiainana aorian' ny fahafatesana
Amin’ ny Vavolombelon' i Jehovah, ny fahafatesana dia tsy fisiana sady tsy fahatsiarovan-tena. Ny Fiainan-tsi-hita, sy ny Hadesy ary ny Sheola dia manondro fotsiny izany toetry ny maty izany. Ny fanahin’ olombelona dia tsy inona fa ny ainy ihany, izay mety maty. "Ondry vitsy" miisa 144 000 ihany no hampakarina any an-danitra fa ny maro amin’ ny mpino Vavolombelon' i Jehovah dia hatsangana amin’ ny maty ka handova tany voadio aorian’ ny Hara-magedona sady ho velona mandrakizay. Ny olona isan’ny Vavolombelon’i Jehovah ihany no hahazo an’ izany.
Ny Fanjakan' Andriamanitra
Amin’ ny Vavolombelon’ i Jehovah, ny Fanjakan' Andriamanitra dia fanjakana ara-bakiteny any an-danitra izay anjakan’ i Kristy sy ireo olona 144 000 avy aty an-tany “voahosotry ny fanahy”. Fahatanterahan’ ny zavatra nokendren’ Andriamanitra tany am-piandohana izany Fanjakana izany, dia ny hanao tany tsy misy na fahafatesana na aretina. Nanomboka tamin’ ny Oktobra 1914 izany Fanjakana izany.
Tsy mamporisika ny olona hitady vahaolana amin’ ny mpitondra na amin’ ny manam-pahaizana olombelona ny Vavolombelon’ i Jehovah satria ny Fanjakan’ Andriamanitra ihany no hamaha ny olana mahazo ny olona.
Araka ny finoan’ ny Vavolombelon’ i Jehovah, izao tontolo izao dia niditra tao amin’ ny Andro farany nanomboka tamin’ ny taona 1914 sady efa miandry ny fandravana izay ho tonga tsy ho ela. Naidina avy tany an-danitra i Satana miaraka amin’ ny loza ho an’ ny olombelona rehetra. Ny fiangonana kristiana hafa rehetra dia ho ravàn’ ny Firenena Mikambana ary ny Vavolombelon’ i Jehovah dia henjehin’ i Satana. Izany no hanombohan’ ny fidiran’ Andriamanitra an-tsehatra ka hanombohan’ ny ady ao Hara-magedona handravana ny fitondran’ olombelona rehetra. Ny Fanjakan'Andriamanitra any an-danitra dia hiitatra ka hahazo ny tany izay hiova ho paradisa mitovy amin’ ny Saha Edena. Hifoha tsirairay ireo izay maty talohan’ ny Hara-magedona hiatrika ny “andron’ ny fitsarana” izay haharitra arivo taona. Ny asany aorian’ ny fitsanganany amin’ ny maty no hitsarana azy fa tsy ny nataony talohan’ ny nahafatesany. Rehefa tapitra ny arivo taona dia haverin’ i Kristy eo amin’ Andriamanitra ny fahefana. Hozahana toetra ny olona ka noho izany dia hovahan’ Andriamanitra i Satana mba hanao asa famitahana. Ireo izay tsy maharitra ny fizahan-toetra dia haringan’ Andriamanitra miaraka amin’ i Satana sy ny demonia rehetra. Olombelona madio sy voazaha toetra no ho sisa hiaina ety ambonin’ ny tany.
Ny Baiboly sy ny fampianarany azy
Ny New World Translation of the Holy Scriptures
Ny boky rehetra ao amin’ny Baiboly protestanta dia noraisin'ny Vavolombelon'i Jehovah ho Soratra Masina avy amin’ny tsindrimandrin’Andriamanitra.
Ny fianarana ny Baiboly
Maro ny andalan-tsoratra izay raisin'ny Vavolombelon’ i Jehovah ara-bakiteny. Ohatra amin’ izany ny amin' ny isa 144 000.
Amporisihin' ny ao amin' ny Filankevi-pitantanana hamaky ny Baiboly ny mpikambana nefa rarany tsy handray fampianarana manokana tsy nivoaka avy ao aminy. Tsy mahazo manao fitsikerana ny zavatra aelin’ ny Filankevitra an-tsoratra ny mpikambana.
Misy mifanaraka tanteraka amin’ny fahamarinana ara-tsiansa sy ara-tantara, hoy izy ireo, ny voalazan’ny Baiboly (jereo : konkordisma).
Manana Baiboly azy manokana ny Vavolombelon’i Jehovah, dia ny New World Translation of the Holy Scriptures ka avy amin’io no niaingan’ny dikan-teny amin’ny tenim-pirenena samihafa. Amin’ny Vavolombelon’i Jehovah dia mitovy lanja amin’ny Soratra Hebreo sy Aramianina (Testamenta Taloha) ny Soratra Grika Kristianina (Testamenta Vaovao) nefa misy zavatra andidian’Andriamanitra ao amin’ny Soratra Hebreo sy Aramianina izay lazainy fa niara-nifarana tamin’ny Lalàn’i Mosesy, ohatra ny fanajana ny andro Sabata.
Ireo Baiboly nampiasaina sy ampiasain’ny Vavolombelon’i Jehovah
Misy amin’ny dikan-teny samihafa ny Baiboly ampiasain’ny Vavolombelon’i Jehovah.
Baiboly amin’ny fiteny anglisy
Ny Baiboly atao hoe The Emphatic diaglott dia navoaka tamin’ny taona 1926. Ny Baiboly araka ny Dikan-tenin’ny Mpanjaka Jacques dia nivoaka tamin’ny taona 1942. Ny Baiboly Dikan-teny Amerikana Mahazatra dia nivoaka tamin’ny taona 1944. Ny Baibolin’i Steven Byington dia natonta tamin’ny taona 1972. Ilay atao hoe The Holy Scriptures – New World Translation (adika amin’ny teny malagasy hoe: "Ny Soratra Masina – Fandikan-tenin'ny Tontolo Vaovao") no Baiboly amin’ny teny anglisy ampiasain’ny Vavolombelon’i Jehovah nanomboka tany amin’ny taona 1950 ka ny Soratra Grika Kristianina (Testamenta Vaovao) no vita tamin’izay. Tamin’ny taona 1960 no nahavitana ny fandikan-tenin’ny Soratra Hebreo sy Aramianina (Testamenta Taloha). Nohavaozina inefatra io Baiboly io hatramin’ny taona 1984.
Baiboly amin’ny fiteny malagasy
Ny Baiboly protestanta (Ny Baiboly) manontolo no nampiasain’ny Vavolombelon’i Jehovah eto Madagasikara mandra-pamoakany ny ampahany amin’ny fandikan-teniny manokana. Rehefa nivoaka ny Soratra Grika Kristianina tamin'ny taona 2003 dia ny Testamenta Taloha ihany no sisa nampiasainy avy tao amin'ny Baiboly protestanta.
Tamin'ny fahavitan’ny fandikana ny Soratra Hebreo sy Aramianina (Testamenta Taloha) amin'ny teny malagasy tamin'ny taona 2009 dia nivoaka ny Baiboly manontolo atao hoe Ny Soratra Masina – Fandikan-Tenin’ny Tontolo Vaovao. Tamin’ny taona 1984 dia io Baiboly io no ampiasain’ny Vavolombelon’i Jehovah nefa miandalana no nialany tamin’ny fampiasana ny Baiboly protestanta ao amin’ireo gazetiboky avoakany.
Ny fifandraisany amin’ny tsy mitovy finoana aminy
Ny Vavolombelona sy ny fiangonana kristiana hafa
Ny fiangonana kristiana hafa rehetra dia lazain’ny Vavolombelon’i Jehovah fa sandoka na kristiana anarany avokoa sady tsy iza fa ilay “Babylona Lehibe” na ilay “vehivavy janga” voalaza ao amin’ny Bokin'ny Apokalypsy toko faha-17, ka tsy mitovy aminy izay “zanak’ilay Fanjakana” sady ilay hany fiangonana marina. Tsy eken’ny Vavolombelon’i Jehovah ny mifangaroharo amin’ny fiangonana hafa satria tokana fa tsy maro ny marina, hoy izy ireo. Tsy mety aminy ny Ekiomenisma satria isan’izao tontolo izao ireo fiangonana mikambana ao aminy. Amin’ny Vavolombelon’i Jehovah dia izy ireo no "vary" (tena Kristiana) fa ny fiangonana kristiana hafa dia "tsimparifary" ("Kristiana anarany" na "sandoka") izay nandrasany ny fandringanana azy tamin’ny fotoam-pijinjana (taona 1874 na 1881). Tsy sahala amin’ireo fiangonana ataony hoe “kristiana anarany” ny Vavolombelon’i Jehovah fa mihevitra ny tenany ho tsy mampiasa zavatra avy tamin’ny mpanompo sampy.
Ny Vavolombelon’i Jehovah sy ny fiarahamonina
Amin'ny Vavolombelon'i Jehovah, tena iankinam-pamonjena ny fisarahana aminin’izao tontolo izao izay tarihin’i Satana. Ilaina noho izany ny mampihena araka izay azo atao ny fifaneraserana amin’olona tsy mitovy finoana aminy. Mihevitra ny Vavolombelon’i Jehovah fa Andriamanitra no manam-pahefana aminy. Noho izany dia tsy mandray anjara amin’ny resaka politika na amin’ny fifidianana misy eo amin’ny firenena izy ireo. Na dia izany aza dia milaza izy fa manaja ny fahefam-pitondrana misy eo amin’ny firenena itoriany sady mandray anjara amin’ny fanatsarana ny fiainana andavanandro raha toa ka tsy miteraka fifandirana izany.
Tsy mankalaza fitsingerenan-taona nahaterahana, tsy mankalaza fetim-pirenena, tsy mandray anjara amin’ny fankalazana hafa rehetra izay heveriny ho fanompoan-tsampy ny Vavolombelon'i Jehovah. Maneho ny fananan’i Satana fahefana eto amin’izao tontolo izao ny fandraisana anjara amin’izany rehetra izany.
Tsy tokony hanao raharaha miaramila ny Vavolombelon'i Jehovah, araka ny fampianaran'ny ao amin'ny foibeny, sady tsy miasa amin’ny orinasa misy ifandraisany amin’ny asan’ny tafika. Tsy manatrika fananganan-tsainam-pirenena, tsy mihira ny hiram-pirenena na hira hafa momba ny fitiavan-tanindrazana (fanindrahindran-tanindrazana) izy ireo. Izany rehetra izany no mahatonga azy ireo henjehin’ny mpitondra fanjakana amin’ny firenena maro na hiatrika fitsarana.
Ireo faminaniana tsy tanteraka
Fiafaran’ny fijinjana (1874)
Tamin’ny taona 1876 dia nanohy ny fampianaran’ireo mpitoriteny advantista i Russell izay milaza fa ny fahatongavan’i Jesosy Kristy tsy hita maso dia efa tamin’ny 1874 izay fiantombohan’ny fanatrehany ("parosia") ary ny fanangonana ireo ondry vitsy dia efa nanomboka koa tamin’izany taona izany. I Kristy dia manatrika nefa tsy hita maso. Hifarana amin’ny 1878 izany fanangonam-bokatra izany ka hovana vatana fanahy ny olo-masina voangona, dia ny Vavolombelon’i Jehovah. Hiakatra velona any an-danitra izy ireo. Tonga ihany ny taona 1878 nefa tsy tanteraka ny faminaniana. Ny mpitarika ny fikambanana anefa nilaza ihany fa nisy zava-nitranga tsy hita maso teo, dia ny nanesoran’Andriamanitra ireo fiangonana tranainy tsy ho eo amin’ny famindram-pony.
Fanovàna ny taona hiafaran’ny fijinjana (1881)
Nanova ny daty hahatanterahan’ny fanambaràny ny amin’ny fanangonam-bokatra i Russell ka ny taona 1881 no nosafidiny ho amin’izany. Hiaka-belona ny Vavolombelon’i Jehovah voangona. Tonga ihany io taona io nefa tsy tanteraka izany ka niteraka olana teo amin’ny fikambanana toy ny fialan’ny mpikambana maro.
Nanomboka tamin’ny taona 1881 dia maro amin’ireo izay nino fa hiakatra velona any an-danitra no nindaosin’ny fahafatesana, tsy araka ny fanambaràn’i Russell. Izany anefa dia nadikany ho fomba iray hampakarana azy ireo ho any an-danitra ka izay maty dia hiova ho vatana ara-panahy eo no ho eo. Nanambara indray anefa i Russell fa izany fotoam-pahasahiranana izany dia hifarana tanteraka amin’ny 1914.
Fifaranan’ny fanjakazakan’olombelona (1914)
Nanambara indray i Russell tao amin’ny boky atao hoe Studies in the Scriptures fa amin’ny Oktobra 1914 no hahataperan’ny fotoan’ny Jentilisa no sady hifaranan’ny fanjakan’ny olombelona. Amin’izany koa no hanombohan’ny Fanjakana arivo taonan’i Jesosy Kristy. Ho rava koa, hoy izy, ireo lazain’ny Baiboly hoe “Babylona” na izay lazaina hoe “Vahoaka kristiana”. Ny ady farany ifanaovan’i Kristy sy i Satana dia ho tapitra. Ny fanjakana rehetra eto ambonin’ny tany dia hazera daholo. Hiakatra any an-danitra hiara-manjaka amin’i Kristy kosa ireo olo-masina vitsy miisa 144 000.
Rehefa nanakaiky ny taona 1914 dia maro ireo mpikambana nizara ny fananany sy nandao ny asany. Tonga ihany ilay fotoana ka nankahery ny mpianany i Russell mba tsy ho azon’ny fiahiahiana satria ny Fanjakan’Andriamanitra eto an-tany dia ho tonga tsikelikely, torak’izany koa ny faharavan’ny Andron’ny Jentilisa.
Tao amin’ny Watchtower i Russell dia nanambara indray fa amin’ny lohataonan’ny taona manaraka (1918) no hitrangan’ny ady ao Hara-magedona. Nihevitra i Russell fa ny Ady Lehibe Voalohany dia fiantombohan’ny adin’i Hara-magedona. Tamin’ny boky Studies in the Scriptures izay navoaka taorian’ny fahafatesany dia novan’ireo mpandimby azy ny hevitry ny taona 1914 ka natao hoe “fanombohan’ny fiafaran’ny andron’ny Jentilisa”. Ny Ady Lehibe Voalohany dia nambarany fa manamarina izany.
Daty hafa heverina ho fanombohan’ny Andro farany (1918)
Rehefa tsy tanteraka ny faminaniana nambaran’i Russell dia nanambara indray izy fa ny taona 1918 no daty tena izy ho an’ny Andro farany. Ny boky atao hoe The Finished Mystery, navoakan’ny Watch Tower Bible and Tract Society tamin’ny taona 1917 dia nanamafy fa ny taona 1918 no handringanan’Andriamanitra ireo fiangonana hafa. Ho fatin’ny pesta sy ny hanoanana ny mpivavaka amin’ireo fiangonana sandoka ireo. Tsy tanteraka anefa ny zavatra nolazain’izany faminaniana izany tamin’ny taona voatondro.
Fitsanganan’ireo patriarka amin’ny maty (1925)
Tao amin’ny boky mitondra ny lohateny hoe Millions Now Living Will Never Die dia nanambara i Rutherford fa hitsangan-ko velona amin’ny taona 1925 ireo “andriandahy” razam-ben’ny Hebreo (i Abrahama sy i Isaka sy i Jakoba ary i Davida) sy ireo mpaminany. Tsy tanteraka ihany koa izay voalaza tamin’izany faminaniana izany. Noho izany dia nilaza i Rutherford fa io daty 1925 io dia fiheverany manokana fotsiny. Tamin’ny taona 1929 anefa dia nanorina trano tany San Diego, any Kalifornia, izay nomeny anarana hoe "Beth Sarim" (“Tranon’ny Andriandahy”) i Rutherford. Tamin’ny 1932 izy dia nanambara fa efa hifarana ny fitorian-teny ataon’ny Vavolombelon’i Jehovah, fa tsy lavitra intsony i Hara-magedona ka tsy hihoatra ny fotoan’ny taranaka iray. Namidy anefa io trano io tamin’ny taona 1948 sady foana koa ny fiandrasana ireo “Andriandahy” tokony honina ao.
Ny fotoana hitrangan’ny Haramagedona (1975)
Tamin’ny taona 1966 ny Vavolombelon’i Jehovah dia nanao fanambaràna fa ny taona 1975 dia taon-jobily maneran-tany satria amin’io no ahafenoan’ny 6 000 taona nahariana ny olombelona. Tany amin’ny taona 4026 talohan’ny fanisana iraisana (izany hoe talohan'i Jesosy Kristy), araka ny fampianaran’ny Society, no namoronana ny olombelona. Hanomboka amin’io taona 1975 io koa ny arivo taona fahafito fitsaharana izay hanjakan’i Jesosy Kristy. Rehefa nanakaiky ny taona 1975 dia maro ireo Vavolombelona nivarotra ny fananany sy nandao ny asany ary tsy nandefa ny zanany hianatra intsony. Nihamafy ny asa fitorian-teny ombieniombieny. Nitombo koa ny isan’ny gazetiboky navoakan’ny fikambanana.
Rehefa tsy tanteraka izay voalazan’ny faminaniany, dia nampangaina ho tsy nahay nandray ny hevitenin’ny fikambanana ireo mpikambana aty ambany. Tamin’ny 15 Marsa 1980 dia niaiky ny fahadisoan’ny kajy nataony ireo mpitarika ny Vavolombelon’i Jehovah. Nihena indray ny isan’ny mpikambana nanomboka tamin’ny taona 1976 vokatry ny fialany an-tsitrapo noho ny fahadisoam-panantenana na noho ny fandroahana azy ireo tsy ho mpikambana satria nitsikera ny ataon’ireo mpitarika.
Vavolombelon'i Jehovah eto Madagasikara
↑ Bernard Blandre, Brepols, coll. « Fils d'Abraham », 1991, 198 p. (ISBN 9782503500638), p. 13-14
↑ La Tour de garde de janvier 1881 : « Notre moisson, qui a commencé en 1874, se termine à la fin du « jour de sa colère » et à la fin des « temps des Gentils », en 1914 – une période analogue et parallèle de 40 ans. [...] Nous découvrons [...] que la loi et les prophètes le déclarent présent à la culmination des « cycles du jubilé » en 1874. Et les parallèles nous montrent que la moisson a alors commencé, et que le rassemblement de l’épouse dans un lieu sûr occupe parallèlement une période de sept ans qui se termine en 1881. [...] Nous croyons que le Christ est maintenant présent, dans le sens qu’il a commencé à assumer son pouvoir et son règne. [...] Nous allons maintenant présenter ce que nous alléguons quant aux types et points prophétiques qui semblent indiquer que l’enlèvement des saints et la fermeture de la porte auront lieu en 1881. ».
↑ (fr) Le mystère accompli, tamin'ny taona 1917, pp. 74-76 : « L'examen des passages scripturaires indiqués plus haut montre que le printemps 1918 amènera sur la chrétienté un spasme d'angoisse formidable plus grand que celui de 1914. »
↑ (fr) Le mystère accompli, tamin'ny taona 1917, pp. 302-303 : « Les îles [citées dans Apocalypse 16 : 20] sont les républiques qui disparaîtront aussi très probablement au cours de l'automne 1920. [...] Tous les royaumes de la terre disparaîtront engloutis par l'anarchie. ».
↑ (fr) Des millions actuellement vivants ne mourront jamais, tamin'ny taona 1920, pp. 75-83 : « La chose principale qui doit être restituée à la race humaine, c'est la vie ; et puisque d'autres passages montrent d'une façon positive qu'Abraham, Isaac et Jacob et les autres fidèles des temps anciens ressusciteront et qu'ils seront les premiers favorisés, nous pouvons nous attendre à ce que 1925 voit le retour de la condition de mort de ces hommes fidèles alors ressuscités et complètement rétablis à la position humaine parfaite, et comme représentants visibles et légaux du nouvel ordre de choses ici-bas. [...] Avec l'argumentation précédemment donnée que l'ancien ordre de choses, l'ancien monde se termine et passe, que le nouvel ordre de choses s'installe et que 1925 doit voir la résurrection des fidèles dignitaires des temps anciens ainsi que le commencement de la reconstruction, il est raisonnable de conclure que des millions de personnes actuellement sur la terre y seront encore en 1925. Et, basés sur les données de la parole divine, nous devons dire d'une façon positive et irréfutable que des millions de personnes vivant actuellement ne mourront jamais. ».
↑ (en) Tony Wills, A People for His Name: A History of Jehovah's Witnesses and An Evaluation, Lulu Enterprises, 1967(ISBN 9781430301004), p. 199 : « Although the claim was made that 'the Lord Jesus himself is in charge of his organisation', they realized it would be more truthfull to substitute 'J. F. Rutherford' for 'The Lord Jesus'. » (« Na dia nambara fa ‘ny Tompo Jesosy tenany no niandraikitra ny fikambanany’ dia tsapan’izy ireo fa marimarina kokoa ny manolo hoe ‘J. F. Rutherford’ ny hoe ‘ny Tompo Jesosy’).
↑ (fr) Miviludes, « Rapport de la Miviludes », 2010 (novakina tamin'ny 17 janoary 2012), p. 87 : « Après avoir prophétisé la fin pour 1914, 1925 et 1975, les Témoins de Jéhovah ont renoncé à lui donner une date précise. Mais, comme l’indique leur publication, La Tour de garde, ils restent sur le qui-vive, guettant tous les signes de la fin du « système de choses actuel », dont ils ne doutent guère qu’elle ne soit proche »
↑ Hoekema, Anthony A. (1963). The Four Major Cults. Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans. p. 270. ISBN 0-8028-3117-6
↑ "Qui est Abaddon (Apollyon)" - Apocalypse 9:11
Tranon-kalan'ny Vavolombelon'i Jehovah:
www.jw.org sy wol.jw.org
Tranonkala mampahatsiahy ireo fampianarana taloha sy vaovao:
212 contradictions de l'organisation des témoins de Jéhovah
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Vavolombelon%27_i_Jehovah&oldid=1042481"
Dernière modification le 25 Desambra 2021, à 15:14
Voaova farany tamin'ny 25 Desambra 2021 amin'ny 15:14 ity pejy ity.